Fall Guys Apk Download ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Salama daholo, mankaleo ve ianao ary te-hilalao kilalao tsotra amin'ny fakan-tsarinao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ity fampiharana mahavariana fantatra amin'ny anarana hoe Fall Guys Apk. Lalao tsotra nefa mifaninana io, izay azonao lalaovina mandritra ny ora maro ary mbola mahafinaritra anao ny milalao azy.
Amin'izao andro izao dia misy karazany maro ny lalao hita eny an-tsena, fa mazàna, izy rehetra dia manodidina ny ambaratonga samihafa, fampahalalana ilaina hamoronana kaonty ary mbola tsy azonao atao ny mankafy ny lalao noho ny mpilalao hafainganana haingana sy tsara.
Noho izany, eto amin'ity lalao ity izahay, izay manome interface tsotra be, tsy mila manao kaonty ianao na tsy momba ny ambaratonga akory. Lalao tsotra fotsiny izay mampiavaka azy. Hizara bebe kokoa momba izany izahay. Ka mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy hahalala bebe kokoa momba izany.
Topimaso momba ny Fall Guys Apk
Izy io dia rindrambaiko Android maimaimpoana, izay manolotra kilalao an-tserasera tsotra miaraka amin'ireo mpilalao hafa manerantany. Izy io dia manolotra fifandraisana tsotra sy manintona izay novolavolaina miaraka amina loko mamirapiratra. Izahay hizara ny gameplay mba hampahafantatra anao momba izany.
Rehefa manomboka ity rindranasa ity ianao dia tsy hahita bokotra tsy ilaina na zavatra hafa toa izany, manolotra bokotra filalaovana tsotsotra izy io rehefa tapinao io. Nitaky fotoana fohy ny fikirakirana azy, izay ny fizotrany manangona mpilalao hafa. Segondra vitsy monja no ilana azy rehetra hanaovana azy.
Rehefa vita ny dingana dia hiseho eo amin'ny saha feno mpilalao hafa ianao. Mihazakazaka manaraka ny hafa izy rehetra. Manana fanontaniana tsotra ianao, nahoana izy ireo no mifanenjika? ny Lalao 3D dia ny hazakazaka. Mila fantarinao fotsiny hoe tokony hihazakazaka amin'ny hafa ianao sa tsy maintsy hisambotra ny hafa?
Saika ny mpilalao rehetra dia mitovy, fa ny mpilalao sasany kosa manana angano mamirapiratra ao an-damosiny ary ny sasany kosa tsy manana izany. Ka raha manana angano mamirapiratra ianao dia mila mihazakazaka ary raha tsy manana dia tokony hangalatra izany amin'ny mpilalao hafa.
Ahoana no hangalatra angano amin'ny mpilalao hafa? Tsotra ny mangalatra amin’ny hafa. Mila hikasika ny mpanohitra amin'ny tantara fotsiny ianao ary hiseho eo an-damosinao ilay tantara. Fa ny asa sarotra dia ny mitantana an'io tantara io mandritra ny iray minitra eo an-damosinao satria ny mpilalao hafa rehetra dia manaraka anao.
Mba hitantanana ny angano ao an-damosinao dia mila mahafantatra momba ny fanaraha-maso ianao. Manolotra karazana fifehezana roa fotsiny izy, ny voalohany dia ny slide eo amin'ny efijery na aiza na aiza misy anao ary ny avatar anao dia hihazakazaka mankany amin'io lalana io. Ny fanaraha-maso faharoa dia ny mitsambikina, raha hanao hitsambikina ianao dia tsy maintsy mikitika ny efijery.
Ny sakana samihafa dia azo atao amin'ny fametahana mpilalao hafa na hampidirana mpilalao hafa ao anaty fandrika. Noho izany dia afaka manana fahafinaretana be ianao rehefa milalao ity lalao ity ary hahatratra ny satroboninahitra volamena. Isaky ny isa lalao isa dia ampiana fanampiny. Betsaka ny zavatra azonao trandrahana, ka atombohy ny fikarohana azy.
anarana Fall Guys
Anaran'ny fonosana com.PepUpStudios.FallGuys3D
Endri-javatra manan-danja amin'ny Fall Guys App
Raha nizara saika taminay rehetra ireo lafin-javatra rehetra momba an'ity rindranasa ity izahay, fa raha mieritreritra ianao fa misy bebe kokoa ary te hizara azy ireo. Azonao atao koa ny mizara azy ireo amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Hizara singa sasantsasany lehibe izahay ao amin'ilay fizarana etsy ambany.
Hipoitra ny doka aorian'ny lalao sasany
Ahoana ny fampidinana ny Fall Guys Apk?
Noho ny antony tsy fantatra dia tsy hita ao amin'ny Google Play Store io. Aza matahotra anefa izahay fa hizara rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity fampiharana ity. Mila tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Fall Guys Apk no lalao tsotra nefa mahatalanjona indrindra, miaraka amin'izany dia afaka mandany ora maro ianao. Mila mitazona ny tantaranao mandritra ny minitra iray fotsiny ianao handresena lalao. Raha mila fampiharana mahatalanjona kokoa ianao dia tsidiho hatrany ny anay Website.
Sokajy Games Tags Fall Guys, Nianjera Guys Apk, Fianaran-dàlana latsaka Post Fikarohana